Trump oo moodayay in ay madaxweynenimadu sidan ka fududahay - BBC News Somali
Trump oo moodayay in ay madaxweynenimadu sidan ka fududahay
3 Maajo 2017
Donald Trump ayaa sheegay in uu moodayay in madaxweynenimadu "ay ka fududatay"sida ay hadda tahay, arrintaas ayuu ku sheegay waraysi lagu beegay markii uu xafiiska hayay boqol maalmood.
"Noloshaydii hore aad baan u jeclaa. Waxyaabo badan ayaana isku waday," ayuu ku kuri wakaaladda wararka ee Reuters.
"Noloshaydii hore waan jeclaa, waxaanna is lahaa tan baa ka fudud."
Intii uu waraysigu socday waxaa kale oo uu sheegay in xogtiisa gaarka ah aysan qarsoonayn hadda marka loo eego markii uu ahaa ganacsadaha.
"qof shabaq yar ku jira ayaad noqon, sababtoo ah ilaalo xaddhaaf ah ayaa jirta xaqiiqatanna meelna ma aadi kartid," sidoo kale wuxuu sheegay in uu u xiisay in uu gaariga gacantiisa ku wato.
Shaqada kali ah ee rasmi ah ee madaxweynaha Maraykanka waxay ka timaadaa dastuurka Maraykanka sida uu qoran JFK Library.
Liiskaas waxaa u horreeya in madaxweynuhu uu yahay abaanduulaha ciidammada qalabka sida ee Maraykanka.
In uu milatariga iyo ciidammada badda xukumo waxaa u wehelisa in madaxweynuhu uu cafin karo magangalyana siin karo dadka dambiyada gala. Iyo in uu heshiisyo la gali karo dalalka isaga oo ansxin ka haysta aqalka Senetka.
Liiskaas oo 10 qaybood ka kooban waxaa ka mid ah "in uu awood u leeyahay in uu helo xogta iyo afkaarta waaxaha fulineed". Wuxuuna "masuul ka yahay dhaqangalinta sharciga dalka".
Markii uu u tartamayay madaxtinimada iyo markii uu xilka qabtayba qaar ka mid ah dadkii codka dhiibtay ayaa walaac ka muujiyay in Trump uusan lahayn khibraddii iyo khabiirnimadii uu shaqadan si hufan ugu qaban lahaa.
"Arrinta aan qabay intii aan la dooranin waxay ahayd in Trump uusan lahayn khibrad hore oo uu ku xoojiyo waxa uu sheegayo," ayay Lori Hack u sheegtay BBC.
Lori oo xubin firfircoon oo xisbiga Jamhuuriga ah ayaan u codaynin Trump.
Haddana mar kale ayay ka hadashay oo waxay tiri
"In aad madaxweyne noqoto way ka duwan tahay in aad shirkad maamusho," waxayna sii raacisay "waxaan u malaynayaa in ay u xaqiiqawday in arrintu aysan kaftan ahay."
Intii uusan galin doorashadii uu ku guulaystay, madaxweyne Trump wuxuu ku hawlanaa ganacsiyo kala duduwan.
Sida ku qoran taariikh nololeedkiisa rasmiga ah wuxuu ku billaabay in uu u shaqeeyo aabihii intaa ka dibna wuxuu billaabay in uu lacag ka sameeyo shirkadda ganacsiga guryaha ee Manhattan.
Hantidiisa waxaa ka mid ah Trump Tower iyo Trump Plaza, wuxuu sidoo kale leeyahay meelo lagu ciyaaro ciyaarta golf iyo huteelo.
Maxaa ilaa iyo hadda u qabsoomay Trump?
Muxuu Trump qaban doonaa marka ugu horaysa?
Trump oo jeediyay hadal muran abuuray
Shiinaha oo Trump uga digay aqoonsiga Taiwan
Trump oo difaacay siyaasadihiisa
Muwaadiniin kale oo ay ka mid tahay Beth Howard ayaan faraxsanayn mana aha oo kali ah taariikh nololeedkiisa ee waxay diidan yihiin qoyska Trump ee ka shaqaynaya Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka.
"Dadkaas ma istaahilaan in ay dalka maamulaan," ayay tiri Beth
Kaaliyaha Trump ayaa warbaahinta Maraykanka ku tilmaamay xisbi mucaarad ah
27 Jannaayo 2017
Madaxweynaha Suuriya oo saaxiibtinimo ka filaya Donald Trump
16 Nofembar 2016
Trump oo midnimo ku baaqay
24 Nofembar 2016
7 Abriil 2017
Muuqaal Daawo: 100kii maalmood ee ugu horreeyey Trump
29 Abriil 2017
Trump oo laamaha sirdoonka ku eedeeyay "sir dusin oo been ah"
12 Jannaayo 2017